I-infographic: Isikhokelo sokusombulula iingxaki kwimicimbi yokuNikezelwa kwe-imeyile | Martech Zone
I-infographic: Isikhokelo sokusombulula iingxaki kwimicimbi yokuhanjiswa kwe-imeyile
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 11, 2020 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 22, 2021 UBob Croft
Xa ii-imeyile zingqubana kunokubangela ukuphazamiseka okuninzi. Kubalulekile ukuya ezantsi kuyo-ngokukhawuleza!
Into yokuqala ekufuneka siqale ngayo kukufumana ukuqonda kwazo zonke izinto ezingena ekufumaneni i-imeyile yakho kwibhokisi engenayo… oku kubandakanya ukucoceka kwedatha, igama lakho le-IP, uqwalaselo lwe-DNS (i-SPF kunye ne-DKIM), umxholo wakho, nayo nayiphi na into Ukunika ingxelo nge-imeyile yakho njengogaxekile.
Nantsi infographic ebonelela ngesishwankathelo esibi sendlela i-imeyile eya ngayo kwindalo ukuya kwi-inbox. Izinto eziqaqanjisiweyo zezona zichaphazela amathuba okuba i-imeyile yakho ihanjiswe kwibhokisi engenayo yomrhumo:
Iingxaki zokuSombulula ingxaki
Ukuqinisekisa ukuba unokusombulula ingxaki kwaye ulungise iingxaki ngokuhanjiswa kwe-imeyile ngokukhawuleza nangokufanelekileyo, nantsi inyathelo elithe ngqo ngesikhokelo samanyathelo okusombulula ingxaki.
Inyathelo 1: Ukuphonononga iiFayile zakho zeLog yokuNgena kwiDatha okanye iVimba yeDatha yeeKhowudi eziNgcono
Jonga isiseko sedatha somthengi we-imeyile ohlaselwe kakhulu. Jonga ikhowudi yokubuyisa kwaye ubone ukuba iqala ngayo Ikhowudi yokubuyisa eyi-550. Ukuba kunjalo, a Isihluzi sogaxekile yingxaki yakho. Ukucela abafumanayo ukuba bongeze idilesi ye-imeyile kwabo banxibelelana nabo kuya kusombulula le nto. Ukuba akunakwenzeka, yiya kwinqanaba elilandelayo.
Inyathelo 2: Jonga i-SPF yakho, i-DKIM, kunye noCwangciso lwe-DMARC, useto lwe-DNS, kunye neMigaqo-nkqubo
Eli linyathelo lakho elilandelayo nokuba uyifumene okanye awuyifumani ikhowudi ye-550 bounce. Iinkqubo ezahlukeneyo zesoftware ziyafumaneka ukukunceda ugcwalise eli nyathelo:
MXTobox UGoogle Jonga iMX Isiqinisekiso seDKIM
Xa la manyathelo engasetwanga ngokuchanekileyo kunokubangela iingxaki zokuhanjiswa kwe-imeyile. Ukongeza, unokungqinisisa olu seto ngokufunda idatha yakho ye-imeyile yesihloko-bahlala bekubonisa ukuba ngaba umsunguli uzidlulisile na ezi tshekhi.
Inyathelo 3: Jonga igama lakho le-IP / amanqaku eSender
Ukuba umcimbi uyaqhubeka kunokubakho ingxaki nge Idilesi ye-IP okanye amanqaku omthumeli. Buyisela iNdlela (ngoku eyiLungelo) isoftware ikuvumela ukuba ujonge amanqaku omthumeli we-IP. Ukuba amanqaku awangqinelani oku kuya kukunika ukuqonda kwesizathu sengxaki. Le software inokukunceda uchonge iindlela zokuphucula ukuya phambili.
Inyathelo 4: Jonga ukuba idilesi yakho ye-IP idwelisiwe
Kukho iinkonzo zomntu wesithathu ukuba zombini ii-ISP kunye neeseyile zotshintshiselwano ngeposi ziqinisekiswe ngokuchasene nokubona ukuba kufanelekile na ukuba bahambise i-imeyile yakho kwibhokisi yomyalezo yabathengi babo. Spamhaus uyinkokeli kolu shishino. Ukuba unokubonelela ngomkhondo wophicotho-zincwadi onobudlelwane beshishini kunye nomrhumeli onike ingxelo njenge-SPAM okanye iirekhodi zokungena, baya kukususa kulo naluphi na uluhlu lwabantu abamnyama.
Inyathelo 5: Jonga umxholo wakho
Ababoneleli ngeenkonzo ze-Intanethi kunye nabathengi be-imeyile bajonge kumagama akwi-imeyile yakho ukuchonga amathuba okuba yi-spam. Ukuchaza nje "Simahla" kumgca wesifundo okanye amaxesha amaninzi kumxholo wakho unokufumana ukuba i-imeyile yakho ithunyelwe ngqo kwifolda yeJunk. Uninzi lwaBanikezeli beenkonzo ze-imeyile baya kukunceda ufumane amanqaku kumxholo wakho kwaye ususe amagama anokukufaka engxakini.
Inyathelo 6: Nxibelelana noMboneleli weNkonzo ye-Intanethi
Ukuba amanqaku omthumeli ayisiyongxaki, kungafuneka unxibelelane nomxhasi we-imeyile ochonge inyathelo lokuqala. Imiba yokuhanjiswa inokuvela ngababoneleli abakhulu abanjengoGmail, iMicrosoft, iBigPond kunye neOptus. Nangona kunjalo, ukuba uchonge umthengi njengedilesi ye-imeyile karhulumente kungcono ungawutyesheli umba njengoko kungenakwenzeka ukuba unxibelelane nequmrhu elifanelekileyo ngokuthe ngqo.
Cela ababoneleli beenkonzo ze-imeyile (uMicrosoft, uGoogle, uTelstra, noOptus) ukuba babhale uluhlu lweedilesi ze-IP. Oku kufanele kuthintele ingxaki ukuba ingenzeki kwakhona. Qiniseka ukuba i-SPF, iDKIM, kunye ne-DMARC zichanekile ngaphambi kokuba unxibelelane nabanikezeli beenkonzo-lo iya kuba ngumbuzo wabo wokuqala. Uya kudinga ukungqina ukuba la manyathelo asetelwe ngokuchanekileyo ngaphambi kokuba benze nantoni na.
QAPHELA: Ifolda yeJunk yile Sihlangulwe
Gcina ukhumbula ukuba i-bounce ithetha ukuba inkonzo yomamkeli iyaliwe i-imeyile kwaye yaphendula ngale khowudi. I-imeyile ezisiweyo (Ikhowudi ye-250 ok) isenokuthunyelwa ku Ifolda ye-Junk… Into kusafuneka usombulule ingxaki. Ukuba uthumela amakhulu amawaka… okanye izigidi zemiyalezo, uya kufuna ukusebenzisa i Isixhobo sokubekwa ebhokisini ukusombulula ingxaki ukuba ii-imeyile zakho ziya kwibhokisi engenayo okanye kwifolda ye-junk.
Ukusebenza ngala manyathelo kuya kwenza ukuba usombulule uninzi lweengxaki zokuthumela i-imeyile ngaphandle kobunzima. Nangona kunjalo, ukuba uwagqibile la manyathelo kodwa umba uhleli, uncedo lukufuphi- nxibelelana neqela lethu ngenkxaso.
Ngokusekwe kweli nqanaba lilapha ngasentla ngesikhokelo samanyathelo, sincede abathengi abaninzi ukusombulula imiba yokuhanjiswa kwabo. Umzekelo, kwenye yeebhanki zeshishini lase-Australia, silandele la manyathelo angentla ukunyusa ukuhanjiswa ukusuka kwi-80% ukuya kwi-95% kwiinyanga ezimbini.
tags: 250ok550 ibhondiuluhlu olumnyamabounce imeyilekonqakrazoukuhanjiswadkimI-DMARCukuhanjiswa kwee-imeyileukuhanjiswa kwe-imeyile infographicbounce nzimaisebenza njani i-imeyilephawula njenge-junkphawula njengengafunekiyoingxelo spamSpamhausspfUkujongana neengxaki zokuhanjiswa kwe-imeyileungabhalisi
Ingcebiso: Uyifumana njani imifanekiso yeVector efanayo kwiStock Photo Site yakho ngokuKhangela imifanekiso kuGoogle